Adeegyada Cuntada | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Adeegyada Nafaqada ee Minnetonka waxay ku faraxsan yihiin inay siiyaan cabitaanno iyo / ama cunnooyin shirarka iyo dhacdooyinka kooxdaada!
Arag liistadayada qiimaha iyo soojeedimaha menu si ay kaaga caawiso qorsheyntaada. Haddii aadan ka helin macluumaadka nooca cabbitaannada ama menus ee aad rabto, fadlan naga soo wac 952-401-5917 ama email noogu soo dir catering@minnetonkaschools.org . Waan kula shaqeyn doonnaa si aan kuu siino alaabada iyo adeegyada aad u baahan tahay.
Markaad qorsheyneyso dhacdo adeegsan doonta makhaayad degmo, waa inaad ka heshaa rukhsad goobta aad ka dhaceyso adigoo u maraya Jadwalka Xarunta Minnetonka ee Degmada oo ah 952-401-5052 Haddii aad ogtahay inaad diyaarinayso isticmaalka jikada Degmada, waxaad u baahan doontaa inaad macluumaadkaas siiso Jadwlaha xilliga aad ka helayso rukhsadda makhaayadda.
Adeegsiga jikada sidoo kale waa in lagu hagaajiyaa xafiiska Adeegyada Nafaqada ee Minnetonka lambarka 952-401-5044. Fadlan nala soo xiriir isla marka aad go'aamiso taariikhda ay dhacdo oo aad ka hesho ogolaansho dhacdadaada Jadwalka Xarunta. Si loo hubiyo helitaanka, ururkaagu waa inuu u soo gudbiyaa Foomka Codsiga Adeegsiga Jikada Adeegyada Nafaqada isla markaaba ka dib marka la hubiyo xarunta. Waxaan kuu soo jeedineynaa inaad sameysid qabanqaabadaada isticmaalka jikada ugu yaraan 2 bilood ka hor dhacdadaada.
Dhacdooyinka dugsiga kafaala qaaday
Markaad qorsheyneyso dhacdo bulsheed ee dugsiga, la xiriir Maamulaha Jikada ee dugsiga. Ururkaagu waa inuu u soo gudbiyaa Foomka Codsiga Adeegga Maamulaha Jikada ugu yaraan afar toddobaad ka hor dhacdadaada. Amarada ugu dambeeya ee cuntada iyo / ama alaabada sahayda ee dhacdooyinka dugsiga waa in la siiyaa ugu yaraan laba usbuuc ka hor si loo waafajiyo jadwalka keenista ee alaab-qeybiyeyaashayada.
Dhammaan madbakhyada Degmadu waa xarumo shatiyeysan. Dhammaan xeerarka, qawaaniinta iyo tilmaamaha waaxda caafimaadka ee heer degmo iyo gobol waa in ay u hoggaansamaan Waaxda Adeegyada Nafaqada Minnetonka iyo shaqaalaheeda loo xilsaaray.
Lacag $ 8 ah ayaa lagu dari doonaa dhammaan amarrada laga soo qaado dhismaha jikooyinka ilaa xarun kasta ama dhisme kale.
Isbedelada ama joojinta amarada
Codsiyada wax ka beddelka ama baajinta dalabyada loogu talagalay adeegga cuntada iyo cabitaanka maalinta dhacdada ayaa la soo oogi doonaa iyadoo loo eegayo awoodda dib loo isticmaali karo walxaha la dalbaday.
Qiimayaasha la taxay way isbadali karaan iyadoo kuxiran sicirka suuqa.
Amarada cabitaanka waa in la dhigaa ugu yaraan hal usbuuc ka hor.
Foomka Codsiga Bixinta (Foomka oo buuxa ee Microsoft Excel iyo emaylka waaxda cuntada)
Doorashada Adeegyada Cuntada
Tilmaamaha Isticmaalka Jikada iyo Foomka Codsiga